လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်အောင်မြင်လိုပါက စာရင်းဇယားကို အလေးထားပါ - Business Centric Network (BCN)
လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်အောင်မြင်လိုပါက စာရင်းဇယားကို အလေးထားပါ
January 31, 2020 February 1, 2020 San Thida
📊📊 လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်အောင်မြင်လိုပါက စာရင်းဇယားကို အလေးထားပါ 🤗🤗🤗 💁‍♂️💁‍♀️ ဘာကြောင့်လဲ ?????
🤔🤔 သင့်ကို လုပ်ငန်းတစ်ခု က ရင်းနှီးမြှပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်မယ် လုပ်ငန်းဘယ်လိုအောင်မြင်တဲ့အကြောင်း၊ ဘယ်လို အကျိုးအမြတ်ရှိကြောင်း တဖွဖွ ပြောပေမယ့် တိကျတဲ့ စာရင်းဇယား နဲ့ မပြနိုင်ခဲ့ရင်၊ သင့်အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမလား????? 💯❌
💯💯 လုပ်ငန်းတိုင်း အစပြုတယ်ဆိုတာ ရေရှည်မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပါ😇😇😇
🔑🔑မလိုအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုများမှ ကာကွယ်ရန်နဲ့ လုပ်ငန်းကို ဘယ်အချိန်မှာ ချဲ့ထွင်သင့်သလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်သင့်သလဲ ဆိုတာသိဖို့အတွက် လုပ်ငန်းရဲ့ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ၊မှန်ကန်တိကျတဲ့ စာရင်းဇယား များက တစ်ဆင့်သုံးသပ်ကာ၊လိုအပ်သာဆုံးဖြတ်ချက်များချရမှာဖြစ်ပါတယ် 😇😇😇
🧐🧐 လက်ထဲမှာ ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲ ?????
😔😔 ပေးရန်ရှိတာက ဘယ်လောက်လဲ ဘယ်တော့ပေးရမလဲ ?????
😎😎 ရရန်ရှိတာက ဘယ်လောက်လဲ ဘယ်တော့ရမလဲ ?????
😔😔 ကုန်လက်ကျန်ဘာတွေရှိလဲ ရောင်းအားကောင်းတဲ့ ကုန်တွေကဘာတွေလဲ အရောင်းထိုင်းကုန်တွေကဘာတွေလဲ ?????
🙄🙄 ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အမြတ်မာဂျင်က ဘယ်လိုရှိလဲ ?????
🏢🏢 လုပ်ငန်းက တိုးတက်မှုရှိလား လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ လိုနေပြီလား ?????
💸💸 ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေကို လုပ်ငန်းအနေအထားချပြဖို့ လိုအပ်တဲ့ 📚📚ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတွေ အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီလား ?????
🔸🔸 အခွန်ရှင်းတမ်းတင်ဖို့ 📚📚ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတွေ အဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီလား ?????
🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♀️ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေ ကို သိဖို့ဆိုရင် စာရင်းဇယားက မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ် 🌝🌝🌝
📈📈 စာရင်းဇယားတွေကို ဘယ်လို ရေးဆွဲကြမလဲ ?????
📍📍 နည်းလမ်းတွေက တော့ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ် 😊😊😊
👨🏻‍💻👩🏻‍💻 ကိုယ်တိုင် စာရင်းမှတ်သားမယ်၊ စာရင်းကိုင်ခန့်ပြီး စာရင်းဆွဲကြမယ် 😊😊😊
👨‍💼👩‍💼 လက်ရေးစာရင်းကိုင်လို့ အသိများကြတဲ့ စာအုပ်တွေသုံးပြီးစာရင်းမှတ်ကြမယ် 📒📒📒
💻💻 ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုပြီး စာရင်းမှတ်ကြမယ်။ ကွန်ပြူတာသုံးတဲ့ အခါမှာလည်း Excel အသုံးပြုခြင်း နှင့် Software အသုံးပြုခြင်းဆိုပြီး ရှိကြပါတယ် 😉😉😉
📚📚အခုခေတ်မှာတော့ လက်ရေးစာရင်းကိုင်ထက်၊ 💻💻 ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုပြီး စာရင်းမှတ်သားခြင်းကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။😊😊😊
💻💻 ကွန်ပြူတာစာရင်းကိုင်စနစ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ တိကျမှန်ကန်ပြီး၊ လချုပ်စာရင်းများ ပြန်လည် ပြုလုပ်ရန်မလိုသောကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ လိုအပ်သည့် အစီရင်ခံစာများကို ကြိုတင်ရေးဆွဲထားသောကြောင့် ပုံစံတကျဖြစ်ခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ရနိုင်ပါတယ်ရှင်😊😊😊
🙋🏼‍♂️🙋🏻‍♀️ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းမှာ စာရင်းဇယားနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးအကူအညီလိုတယ်ဆို ရင်တော့ Business Centric Network Company Limited မှ တာဝန်ယူပေးပါရစေရှင် 😘😘😘
🤔🤔 လိုအပ်တဲ့ လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ၊ သင့်တင့်သော နှုန်းထားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါတယ် အသုံးမပြုမီတွင် လိုအပ်သော အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် 😊😊😊
🔷 Manual Format ချခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ကို (၃)သိန်းမှ စတင် ရယူနိုင်ပါတယ် 😊😊
🌎🌎 Digital Accountant ဝန်ဆောင်မှုကို လစဉ်ကြေး ၈၀၀၀၀ မှ စတင် ရယူနိုင်ပါတယ် နေ့စဉ်ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်းများကို ပေးပို့ပြီး လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို ဖုန်း သို့ ကွန်ပြူတာဖြင့် ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင် 🤗🤗🤗
📕📕 MSME Books (Cloud Based Accounting Software) လစဉ်ကြေး ၃၀,၀၀၀ ကျပ်မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် လုပ်ငန်းတစ်ခု အတွက် သုံးစွဲသူဦးရေ ကန့်သတ်မထားခြင်း၊ ဆိုင်ခွဲများတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင် 😇😇😇
🏢🏢လက်ရှိ အသုံးပြုသူ (၁၀၀) ကျော်ရှိသည့်အတွက် ယုံကြည့်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်💯💯
💌 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Viber : 09977160671 (or) info@businesscentricnetwork.com သို့လည်း ပေးပို့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင် 🥰🥰
#Accountant #BCNRA #BCN #DigitalAccountant #CloudBasedAccountingSoftware #AccountingSoftware #AccountingSolution #MSMEBooks
Previous postOpening Balance များထည့်သွင်းရန်လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့် @MSMEBooks
Next post😖 😖 😖 သင်သိပြီးပြီလား Personal Income Tax (PIT) လစာဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမည့် ရက်ကျော်သွားရင် ဒဏ်ကြေး ရှိတယ်ဆိုတာ 🔊 🔊 🔊